बुवा भन्छन्- प्रहरीले विनाप्रमाण किटानी... :: शोभा शर्मा :: Setopati
शोभा शर्मा काठमाडौं, भदौ ५
कञ्चनपुरमा १३ वर्षिया निर्मलाको हत्यामा प्रहरीले वास्तविक अभियुक्तलाई सार्वजनिक नगरेको भन्दै मंगलबार कञ्चनपुरमा गरेको विरोध कार्यक्रम। तस्बिरः दिनेश एफएम
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा पक्राउ व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन प्रहरीले दबाब दिएको उनको परिवारले बताएको छ।
यो घटनामा प्रहरी अनुसन्धान चित्तबुझ्दो नभएको आरोप लगाउँदै निर्मलाका बुवा एकराज पन्तले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने, 'प्रहरीले आफूले समातेर ल्याएको मान्छेविरुद्ध किटानी जाहेरी देऊ भनिरहेको छ। मैले मानेको छैन। उसैले अपराध गरेको हो भन्ने प्रहरीले प्रमाण पनि दिएको छैन। विनाप्रमाण चिन्दै नचिनेको, कहिले देख्दै नदेखेको मान्छेलाई प्रहरीले भन्दैमा कसरी किटानी जाहेरी दिउँ?'
कन्चनपुर, भिमदत्त नगरपालिका-२ की १३ वर्षीया निर्मलाको साउन १० गते बलात्कार र हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त घटनाको २६ दिनपछि सोमबार प्रहरीले भिमदत्त नगरपालिका, बागफाँटाका दिलिपसिंह विष्टलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो। यो घटनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरिरहेको छ।
विष्टविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन सोमबारै जिल्ला प्रहरी कार्यालय डाकिएको पनि पन्तले बताए।
'हिजो मलाई र मेरो बूढीलाई जिप्रका बोलाइएको थियो। काठमाडौंबाट आएका सिआइबीवालाले नै बोल्यो - एउटा बागफाँटाको मान्छेलाई पक्रेको छ। उसको नाममा किटानी दिनुपर्यो,' पन्तले सेतोपाटीसँग टेलिफोन कुराकानीमा भने, 'तर मैले मानिनँ।'
आफूले प्रहरीलाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै उनले भने, 'म त किटानी दिन सक्दैन। त्यो मान्छेलाई कहिल्यै देखेको छैन। चिनेको पनि छैन। नामै थाहा छैन। उसैले अपराध गरेको हो भनेर प्रहरीले प्रमाण पनि देखाउँदैन।'
पन्तले यस्तो जवाफ दिएपछि काठमाडौंबाट गएका सिआइबी अिधकारीले भने, 'तपाईंहरुले किटानी दिनुभयो भने हामीलाई कारबाही गर्न सजिलो हुन्छ।'
यति भन्दा पनि पन्त मानेनन्।
तारन्तार जिद्दी गरेपछि उनले भनेछन्, 'बरू मेरो छातिमा गोली ठोक्नू, तर म त्यस्तो व्यक्तिको नाममा किटानी दिन्नँ।'
पक्राउ परेका व्यक्तिलाई आफूसँग कुरा गराउन पनि प्रहरीलाई आग्रह गरेको उनले बताए। भने, 'मैले त्यो मान्छेसँग कुरा गराउनू भनेको थिएँ। उसले मेरो अगाडि उिभएर कसरी त्यो अपराध स्वीकार गर्दो रहेछ सुन्छु। उसले स्वीकार गर्यो भने बल्ल जाहेरी दिउँला। मैले यसो भन्दा पनि उहाँहरु मान्नुभएन। खाली एकोहोरो किटानी जाहेरी दिन दबाब मात्र दिइरहनुभयो।'
प्रहरी पक्राउ परेका विष्टलाई निर्मलाको परिवारसँग भेटाउन नमिल्ने भन्दै पन्छिएको थियो। बरु थप नयाँ प्रमाण फेला पर्छ कि भन्दै उनीहरूलाई पनि लिएर प्रहरी घटनास्थल गएको थियो। पन्त आफ्ना दाजुभाइसहित गएका थिए।
'जानेबित्तिकै मलाई त प्रहरीको नाटकैजस्तो लाग्यो। जहाँ छोरीको साइकल भेटिएको थियो, त्यहाँबाट पारिपट्टि डिलमा एउटा कण्डमको खोस्टा भेटिया छ। एउटा च्यातिएको खल्तीको टुक्रा भेटिया छ। त्यसमा केही दाग छैन,' उनले भने, 'ती एकदम सफा अवस्थामा छन्। यतिका दिनमा कति बारिस भैसक्यो, त्यसमा केही लागेको छैन। न हिलो छ न त धूलो। वरिपरिका अरू जिनिसमा दाग देखिन्छ, यिनमा भने किन छैन?' पन्तले भने।
पन्तले यही प्रश्न सँगै घटनास्थल गएका प्रहरीलाई पनि सोधेका थिए। चित्तबुझ्दो जवाफ पाएनन्। उल्टो परिवारकै सदस्य भएर अनुसन्धानमा सघाउ नपुर्याएको आरोप लगाइएको उनले बताए।
'मैले त्यसरी सोध्दा उहाँहरूले 'तपाईंलाई प्रहरीमा विश्वासै छैन। हामीले गरेको काम तपाईंलाई केही पनि राम्रो लागेको छैन। तपाईंहरु आन्दोलनै गर्नेमा हुनुहुन्छ भने त्यही गर्नू' भनेर जवाफ दिनुभयो,' पन्तले भने।
स्थानीयले पनि निर्मला हत्याका दोषी भन्दै प्रहरीले नक्कली मानिस खडा गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रहरीको अनुसन्धानमा असन्तुष्टि जनाउँदै मंगलबार कञ्चनपुर बन्द छ।
प्रहरीका अनुसार निर्मलाको हत्या साउन १० गते दिउँसो सवा २ देखि ३ बजेभित्र भएको हो। उनी बिहान ११ बजेतिर साथी रोशनी बमको घर गएकी थिइन्। साँझसम्म नफर्केपछि परिवार र गाउँलेले खोजी गरे। भोलिपल्ट बिहान निम्बुखेडा खोलासँगैको उखुबारीमा उनी मृत फेला परिन्। उनको बलात्कारपछि हत्या भएको पोष्टमार्टम रिपोर्टले पुष्टि गर्यो।
घटनाको २३ दिनपछि गत शुक्रबार प्रहरीले विष्टलाई पक्राउ गरेको हो।
उनलाई निर्मलाको साइकल भेटिएको उखुबारीबाट ५० मिटर दुरीमा उभिइरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। विष्ट ९ वर्षअघि आफ्नै भिनाजुलाई हत्या गरेर जेल परेका थिए।
पत्रकार महासंघ कञ्चनपुरका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय लक्ष्मण तिवारीका अनुसार जेलमा असल चालचलन देखाएको भन्दै गत वर्ष सरकारको सिफारिसमा उनको बाँकी कैद मिनाहा भएको थियो।
मादकपदार्थ र अत्यधिक गाँजा सेवन गर्ने विष्टले परिवारका स्त्रीहरूलाई पनि यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार विष्टले निर्मलालाई उखुबारी नजिकैको एकान्त बाटोमा साइकल बनाउँदै गरेको भेटेपछि पहिले साइकल मर्मत गरिदिएको र पछि बलात्कार गरेर मारेको बयान दिएका छन्।
घटनास्थल हेर्दा विष्ट एक जनाले मात्र बलात्कार र हत्या गरेको नदेखिने स्थानीयको भनाइ छ। प्रहरीले मुख्य दोषी पत्ता लगाउन नसकेपछि पहिल्यै हत्यामा सजाय पाइसकेका व्यक्तिलाई उभ्याएको उनीहरुले आरोप लगाए।
प्रहरीले निर्मला हराएलगत्तै पनि खोजबिनमा चासो नदिएको उनको बुवाले बताएका छन्।
'गाउँभरि खोज्दा पनि छोरी नभेटिएपछि मेरी बूढी फेरि रोशनीको घर गएकी रहिछ। त्यसपछि यिनीहरू प्रहरीमा गएछन्,' पन्तले भने, 'तुरुन्तै रिपोर्ट गर्न जाँदा पनि प्रहरीले तातो लगाएन। भोलि खोजौंला भन्दै पन्छियो।'
रातभरि निर्मला घर नआएपछि भोलिपल्ट बिहानै परिवार र गाउँले फेरि रोशनीको घर पुगेका थिए। त्यहाँ छलफल हुँदा हुँदै एक जनाले निर्मलाको साइकल खोलामा भेटिएको खबर ल्याए। नजिकै उखुबारीमा निर्मलाको शव पनि भेटियो। प्रहरी आएर मुचुल्का उठायो। ट्रकमा राख्यो। त्यतिञ्जेल गाउँले जम्मा भैसकेका थिए। मेयर आएर जिम्मा नलिएसम्म शव उठाउन नदिने भन्दै स्थानीयले रोके। प्रहरी शव छाडेर फर्किए।
स्थानीय पत्रकार अम्बादत्त तिवारीले सिडिओलाई फोन गरेर प्रहरीले शव छाडेर गएको सूचना दिएपछि उनीहरु फेरि फर्केका थिए।
'प्रहरीले सुरूदेखि नै लापरबाही गरेको छ,' निर्मलाका बुवाले भने, 'अहिले पनि राम्ररी अनुसन्धान गरिरहेको छैन। हामीलाई अरुमाथि पनि शंका छ। प्रहरी भने आफूले समातेको मान्छेलाई नै दोषी ठहर गराउन खोजिरहेका छन्। उल्टो हामीलाई अनुसन्धानमा सहयोग नगरेको आरोप लगाउँछन्।'
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ५, २०७५, १३:४५:००